Ndị German ọ kwesịrị ịla ọzọ Afrịka?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndị German ọ kwesịrị ịla ọzọ Afrịka?
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Mịnịsta na-ahụ maka mmepe German bụ Gerd Müller (CSU) arịọla Mịnịsta Ofesi Heiko Maas (SPD) ka ọ tụlee mmachi njem ndị amachibidoro mba Afrịka n'ihi ọrịa corona.
Mịnịsta na-ahụ maka mmepe maka mmachi Mgbochi Njem Afrịka maka ndị German ka ha gaa Africa. "N'Africa naanị, nde mmadụ 25 bi na njem, dịka ọmụmaatụ na Morocco, Egypt, Tunisia, Namibia ma ọ bụ Kenya," Müller kwuru na "Redaction Network Germany". “Ọ bụrụ na mba ndị ahụ enwechaghị ọ̀tụ̀tụ̀ bute ọrịa ma na-ekwe nkwa ụkpụrụ ịdị ọcha dị ka ndị ahụ dị na Europe, ọ dịghị ihe ga-eme ka ha kwụsị njem nleta.”
Ọ bụ maka ọtụtụ nde ọrụ, ọ bụ maka ndị osi ite, ndị na-ehicha ihe na ndị ọkwọ ụgbọ ala, onye ozi ahụ kwuru. "Ha niile chọrọ ọrụ iji lanarị," onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị CSU gwara RND. O chetara na enweghị ego obere oge ma ọ bụ inyefe ego na mba ndị ka na-emepe emepe. “Ndị mmadụ na-adọga ịlanarị ụbọchị ọ bụla,” ka Müller dọrọ aka ná ntị.
Cuthbert Ncube, onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa kwuru, sị: “Anyị ji obi aka nabata ndị ọbịa si Jamanị nọ n'Africa. Yesterdaynyaahụ Kenya ka etinyebere stampụ Safe Travels nke WTTC. Ndị African Tourism Board ga-arụ ọrụ na ebe ndị Africa ga-eme ihe ọ bụla enwere ike ime ka ndị njem nleta na German nwee nnabata na nchekwa.